Polis-ka oo filayo ka hortagga ururka Nazi-ga ah ee NMR - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Polis-ka oo filayo ka hortagga ururka Nazi-ga ah ee NMR
La daabacay fredag 28 april 2017 kl 10.59
Poliska oo filaya in ka hor imaadyo lagala hortago Naziyiinta MNR
Sawirkii : Johan Nilsson/TT, Fredrik Sandberg/TT
Ururka xagjirka ah ee iska caabinta Nordis-ka oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano NMR ayaa sanadkii labaad waxay mudaaharaadi doonaan 1-da bisha maajo.
Ciidamada booliiska ayaa abaabul ku jira si ay uga hortagaan gacan ka hadalka sii kordhaya oo dhexmara ururada fikrado ahaan iskaga soo horjeeda.
Fredrik Dahlgren oo ah walkiilka ciidamada booliiska u qaabilsan wadaxaajoodka bannaanbaxa 1-da maajo la xiriira, ayaa isagoo arrinkaan ka hadlaya wuxuu yiri sidan soo socota:
-Waxaa hadda socda abaabulo looga hor tagaayo ururka iska caabinta Nordiska. Dad caadi ah ayaa ka hor imadkaas wada lakiin sidoo kale waxaa iyaguna abaabulo kuwaa la mid ah wada dad xagjir ah oo ururada garabka bidixda ah kuwaas oo ka soo horjeeda ururka iska caabinta Nordis-ka, ayuu yiri Fredrik Dahlgren oo ah walkiilka ciidamada booliiska u qaabilsan wadaxaajoodka 1-da may la xiriira.
Mudaaharaadyadaan uu ururka iska caabinta Nordis-ku dhigayaan 1-da bisha maajo ayaa loo arkaa in ay tahay mid daandaansi ah.
Sanadkii la soo dhaafey ayaa 1-dii maajo waxaa magaalada Borlänge isugu soo baxay dad dhan 300 oo qof oo taageersan ururka xagjirka ah ee iska caabinta Nordis-ka.
Mudaharaad midkaas la mid ah ayaa ururkaasi wuxuu bishii november ku qabtey magaalada Stockholm, waxayna ciidamada booliisku qiyaasayaan in magaalada Falun ay dad ururkaas taageersan oo qiyaastii ilaa kun qof gaarayaa mudaharaad ka dhigi doonaan 1-da bisha maajo.
Dadka u ololeeya ururka NMR oo fikradaha Naazi-ga aaminsan ayaa sanooyinkii danbe dalkaan kor u kacey, kuwaas oo adeegsada in ay waraaqo fikaradooda xanbaarsan dadka dhanka boostada ugu diraan ama ay waraaqo fikirkooda xanbaarsan ku dhajiyaan boorarka ku yaala goobaha fagaaraha ah ee ay bulshadu ka dhowdahay.
Degmada Göteborg ayaa waxaa jira saddex qof oo lagu tuhunsan yahay in ay saddex walxood oo qaraxyo lagu soo rakibey dhigeen goobo kala duwan lixdii bilood ee la soo dhaafey.
Anna Hedin-Ekström oo xubin ka ah golaha qaran ee dalkaan Sweden u qaabilsan ka hortagga xagjirka gacan ka hadalka iyo rabshadaha adeegsada, ayaa waxay tiri sidan soo socota:
- Arrinkaani waa mid xanbaarsan khatar aad iyo aad u weyn maadama ururadaan xagjirka ahi adeegsanayaan gacan ka hadal rabshada wata , dad badana ay handadaad dareemayaan. Dhamaanteena waxaa khasab nagu ah in aan ka hortagno , ayey tiri Anna Hedin-Ekström oo xubin ka ah golaha qaran ee dalkaan u qaabilsan ka hortagga xagjirka gacan ka hadalka iyo rabshadaha adeegsada.